Corona महामारीकै बेला नारा
अपराध Corona महामारीकै बेला नारा
Kathmandu: Corona महामारीकै बेला त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक, धरान, रौतहट र सुदुरपश्चिम प्रदेशलगायत ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको थियो।
उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीविरूद्ध हिंसा अन्त्य गर्न पनि माग गरेका छन्।
मेडिका हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा कार्यरत डा. झामाथि बिरामी कुरुवाको १० जनाजतिको समूहले कुटपिट गरेको थियो । झापाको मेडिका हस्पिटलमा कार्यरत डा. सुधाकर झामाथि कुटपिट गर्नेहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
चिकित्सकको एउटा टोलीले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् ।
घटना भएको १० दिन बितिसक्दा पनि कुटपिटमा संलग्नमाथि कारबाही नभएकाले प्रदर्शनमा उत्रिएको आन्दोलनमा सहभागी नेपाल मेडिकल कलेजका डा. मणिविकास गुप्ताले जानकारी दिए ।
प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकले बिरामी हेर्न मन छ, तर अझै कुटाइ खाने डर छ । लाठीको जवाफ लाठीमै दिनु ? न्याय खै ? जस्ता नारा लेखेको प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
आइतबारको प्रदर्शनमा नेपाल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू सहभागी थिए ।
चिकित्सकमाथि कुटपिटको विरोधमा काठमाडौंमा चिकित्सकहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । हातमा प्लेकार्ड बोकेका स्वास्थ्यकर्मीले आफूहरूमाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि मौन प्रदर्शन गरेका हुन्। सेतो एप्रोन लगाएर भेला भएका स्वास्थ्यकर्मीले हिंसाविरूद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन्।